Ayisicabangi isithembu intokazi yeLockdown - Ilanga News
Home Izindaba Ayisicabangi isithembu intokazi yeLockdown
Izokhipha i-albhamu eyibhekise kwabesifazane
UKUBEKEZELA nokuzazi ukuthi ufunani, ngezinye zezinto athi ziholele ekubeni abe lapho ekhona umlingisi nomculi uNelisiwe Sibiya (27), njengoba engomunye wabacula phambili emdlalweni weshasha-lazi iSarafina ezokhonjiswa
eJoburg Theatre kusukela
UNelisiwe waziwa ngengoma yakhe ethi “Mama KaBafana” ka-nti uphinde abhale umculo odla-lwa emdlalweni kamabonakude, iLockdown, odlala kuMzansi Magic (channel 161) ngoMsombuluko ngo-20h00.
Le ntokazi ethi ikhule kanzima, ithi iyakholelwa ekutheni unina ongasekho emhlabeni, uNkz Dudu Mngomezulu, nguyena oyi-ngelosi enhle kuyona ngoba ku-dlule yena emhlabeni kwabe se-kuqaqeka izinto eziningi empi-lweni yayo, kwavuleka namathuba omsebenzi.
umndeni wakhe uda-buka eShowe kodwa ukhulele eDuduza, e-East Rand, eGoli, okuthe eseyofunda esikhungweni semfu-ndo ephakeme unina wakhetha ukubuyela KwaZulu-Natal.
Le ntokazi iqede umatikule-tsheni yachitha iminyaka emine isebenza ukuze ikwazi ukuzifu-ndisa, okuthe isiyenza unyaka wo-kuqala etshwane University of Technology (TUT), unina wayi-tshela ukuthi usefuna ukubuyela ekhaya, kwadingeka ithathe yo-nke le mali ebiyongile kule mi-nyaka emine, yamakhela umuzi eMpangeni.
“Kusukela ngo-2011 kuya ku-2014, bengisebenza ngibeka imali yokuzifundisa, ngithe senga-khela umama umuzi, ngaphoqeleka ukuqhubeka nokusebenza, okuyinto othisha bami ababenga-zitsheli ukuthi ingenzeka ngoba kwakungavumelekile.
“Ngabahlalisa phansi ngaba-tshela ngesimo sami, bangivumela ngasebenza. Ngangisebenza ngisho nase-nightclub, ngidansa khona ngenza imali
engango-R12 000 ngenyanga,” kusho yena.
Uthi uqale wenza izifundo ze-Marketing kodwa wangaziqeda, wabe esenza ezeMusical Theatre ngoba ubevele enothando loku-ba kulo mkhakha akuwona njengamanje.
“Ngaphandle kokusebe-nza kuma-nightclub, benge-nza ama-musical, okuyila-pho ngakhe khona ubu-hlobo nabantu abaningi abakulo mkhakha,” kusho yena.
Uthi ngemuva kwe-zinsuku ezimbili unina edlulile emhlabeni, uhla-ngane noMa-ndla N we-Black brain Pictures, wa-msayinisa ukuba asebe-nze naye.
Uthi ngemuva kwalokho kube se-kuvuleleka izinto eziningi njengoba kuyimanje ethi usephothula ukuqopha i-albhamu yakhe ezophuma ngenya-nga yabesifazane uNcwaba (August).
“Le albhamu engizoyikhipha ngiyibhalele abesifazane ngoba ngiyabazi ubuhlungu nezinto ezi-ningi ababhekene nazo. Ngiyibiza ngokuthi Mngomezulu, okuyisibongo sikamama ngoba uyingilosi enhle kimi,” kusho le ntokazi.
Ukubeka kucace ukuthi ngisho sekwenzekani, akazimisele ngo-kushadela esithenjini ngoba ubo-nile indlela unina – obeganele esithenjini – agcine ehlukumezeka ngayo.
Uthi naye ngonyaka odlule uke wahlaselwa yingcindezi, wathola ukuthi yingoba engaxolile ngezi-nto ezenzeke empilweni yakhe esakhula. Yizo kanye lezi zinto eziphinde zimenze abhale umculo owelapha umphefumulo.
“Ngikhule sihlukumezeka ka-khulu emndenini sinomama, ku-yimanje nje, kusekhona ukungezwani emndenini naphakathi kwami nezingane zikababa ngoba ezinye kangizazi nokuthi zikuphi kodwa siyishumi kuye.
“Sengixolile kokuningi, kodwa kusekhona okudinga ukuba ngikudlulise ngoba nami ngingumu-ntu. Engingakusho nje, wukuthi umculo wami nami uyangelapha futhi ngiyakholelwa ekutheni uzo-kwelapha abaningi. Izingoma ezi-ningi zazo ngezikamasikandi oku-yiSengonile, iMzali Wami, yiLa-khal’ Icilongo ne-Amaphara,” kusho yena.
Le ntokazi ithi ifuna ukugxila emculweni ngoba kayifuni ukwe-nza izinto eziningi igcine ingaziwa ukuthi yenzani kulo mkhakha. Ezinsizweni ezifisa ukuzibika, se-konakale njengoba ithi isinqa-ndamathe sayo sizimisele ngokut-humela abakhongi kubo siyocela isihlobo esihle.
“Okwamanje kangithandi ukumveza ngoba kumele kuqale kwaziswe umndeni ngezinhlelo ana-zo, kodwa nje ungowaKwaZulu-Natal futhi sesinesikhathi eside sithandana,” kusho yena.
Ukhonze ukushaywa wumoya avakashele amazwe, uthi lokhu ukwenza ngoba ngesikhathi esa-khula akakwazanga ukujabulela impilo. Kubantu abasha baseNingizimu Afrika, uthi kubalukile ukukholelwa emaphusheni abo.
“Okufisayo kukhulume ngomlomo ngoba umlomo uyadala. Uma ukhuluma amazwi amabi ngawe, ngeke uphumelele. Zikhuthaze, ukhulume kahle ngawe konke okufisayo kuzoza kuwena,” kusho uNelisiwe.
Previous articleKubonwa ngokusa kunogada odutshuliwe
Next articleBamiswe isibindi abathandi beBafana